Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဆရာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်။ ကျမအသက် ၃၂ နှစ်ထဲမှာပါ။ သွေးလှူတာ ၄ လ တစ်ကြိမ်ခြား ၃ ခါဆက်တိုက် ရှိပါပြီ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၄ လတစ်ကြိမ် သွေးလှူခြင်းကို ဆက်တိုက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အားနည်းချက် အားသာချက်များကို သိချင်ပါသဖြင့် လေးစားစွာဖြင့်မေးမြန်းအပ်ပါသည်ဆရာ။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာလူနာ၊ အကြီးစားခွဲစိတ်လူနာ၊ မီးလောင်လူနာ၊ Haemophilia သွေးရောဂါလူနာ၊ သွေးအားနည်းလူနာ၊ စသူတွေဟာ ၂၄ နာရီမပြတ်ရှိနေတာမို့ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေမှာ သွေးလှူမဲ့သူဆိုတာ အမြဲလိုအပ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး သွေးလှူကြပါ။ သွေးအုပ်စု (အို) တွေက လှူရတာပိုများတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၄၅%-၅၁%-၅၇% ရှိတယ်။ သွေးလှူခြင်းဥပဒေသတွေဟာ သွေးလှူဘဏ်တခုနဲ့တခု မတူပါ။
• သွေးလှူမဲ့သူမှာ HIV အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ (ဘီ) နဲ့ (စီ) အသဲရောင်ရောဂါ၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါမရှိတာကို စစ်ဆေးပါမယ်။
• တက်တူးထိုးထားသူဆိုရင် တက်တူးထိုးပြီးနောက် ၁၂ လ (တနှစ်) စောင့်ရမယ်။ တက်တူးထိုးတုံးက အပ်အဟောင်း သုံးထားရင်၊ အပ်ကမသန့်ရင် အသဲရောင်ရောဂါရှိနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ အပ်စိုက်ကုသမှု ခံယူထားသူတွေ။ အလှအပကွင်းတွေ တပ်ဆင်ထားသူက ကိစ္စမရှိပါ။
မပြောနိုင်ပါ။ ရောင်းကုန်ကြောညာတွေလို အကောင်းချည်း မပြောသင့်ပါ။ ပြောနိုင်တာက သွေးလက်ခံရယူတဲ့သူမှာ ကျန်းမာရေးပိုကောင်း (အသက်ကယ်) နိုင်ပြီး သွေးလှူတဲ့သူဟာ စည်းကမ်းနဲ့အညီလှူရင် ကျန်းမာရေး မထိခိုက်ပါ။ သွေးလှူလိုက်လို့ AIDS ကူးမလာစေပါ။ သွေးလှူဘဏ်စည်းကမ်းအလိုက် သွေး ၃၅ဝ-၄၅ဝ စီစီ ထုတ်ယူမယ်။ လူတိုင်းမှာ သွေး ၅-၆ လီတာ ရှိတယ်။ သွေးလှူပြီးနောက် ၂၄-၄၈ နာရီမှာ ထုထည်အရပြည့်လာမယ်။ သွေးနီဥတွေက နောက် ၅၆ ရက်မှာ ပြန်ပြည့်ပြီ။ နောက်တခါသွေးလှူဘို့ ၃-၄ လ စောင့်ရမယ်။ (အသေးစိတ်ကို စာတပုဒ်သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။)
ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်တဲ့စာတွေ -
1. Anemia (အနီးမီးယား) သွေးအားနည်းရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/hb-gdl-celiac-dis…
2. Anemia and low Blood pressure သွေးအားနည်းတာနဲ့ သွေးဖိအားနည်းတာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/anemia-and-low-blood-pr…
3. Aplastic anemia အေပလပ်စတစ် သွေးအာနည်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/aplastic-anemia.html
4. Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/blood-donation-ru…
5. Blood Donation မြတ်သော နီသော သွေး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/blood-donation.h…
6. Blood Grouping (A, B, AB, O) အေ၊ ဘီ၊ အေဘီ၊ အို သွေးအုပ်စု ဇယား http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/b-ab-o.html
7. Blood Groups for blood donation သွေးအုပ်စုဇယား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/blood-groups.html
8. Blood groups သွေးအုပ်စုများ အနည်း-အများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/blood-groups.html
9. Blood Types and Paternity Determination သွေးအုပ်စုများ ဖခင်စစ်-မစစ် အငြင်းမပွါး
10. Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/folic-acid.html
11. Iron supplements သံဓါတ်အားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/11/iron-supplements.html
12. Low white blood cell count သွေးဖြူဥနည်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/low-white-blood-cell-co…
13. Medical check-up before marriage အိမ်ထောင်မပြုခင် ဆေးစစ်ချင် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/…/medical-che…
14. Microcytic hypochromic Anemia သွေးအားနည်းရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/microcytic-hypochromic-…
15. Rh blood group system (အာရ်အိတ်ခ်ျ) သွေးအုပ်စုခွဲနည်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/rh-blood-group-sy…
16. Thalassemia (သာလာဆီးမီးယား) သွေးအားနည်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/thalassemia.html
17. သွေးအုပ်စုပဟေဠိ အဖြေညှိခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/20…/…/blog-post.html